Aleppo ayaa ahayd magaalada labaad ee Syria ugu weyn markii uu qarxay dagaalka sokeeye ee dalkaas muddo shan sano laga joogo, waxayna iminka xudun tahay dagaalka u dhaxeeya ciidamada dowladda taageera iyo mucaaradka.
“Waxa dhaqaatiir ahaan xanuunka nagu haya ayaa ah inaan kala doorano qofka dhimanaya iyo qofka noolaanaya. Mararka qaar waxaa naloo keenaa caruur dhaawac liita ah oo nagu qasbeysa inaan ka door bidno dadka waa weyn ee leh fursadda noolaasho” ayaa lagu yiri warqadda.
“Muddo shan sano ah ayaa waxaan dhimashada u wajaheynaa si joogto ah, hase yeesheeiminka xaaladda waa ka dartay waxaana ka wajaheynaa dhinac walba. Muddo shan sana ah dunida waxay ka hadleysaa xaaladda liidata ee halkan, haddana waxba kama qabaneyso”
Dadaallo QM ay taageeryso oo ay wadeen Mareykanka iyo Ruushka, kuwaas oo xabad joojin looga hir-gelinayo magaaladaas ayaa guul darreystay.